Nyaya Youpenyu: “Zvitsuwa Zvizhinji Ngazvifare” | Yokudzidza
“Zvitsuwa Zvizhinji Ngazvifare”
Fungisisa Nezverudo rwaJehovha Rwusingaperi
Zvatinodzidza Kuna Joana
“Jehovha Akakuunzai kuFrance Kuti Muzodzidza Chokwadi”
Nharireyomurindi (Yokudzidza) | August 2015
Yakataurwa naGeoffrey Jackson
Zuva iri handifi ndakarikanganwa. Waiva musi wa22 May, 2000. Ndaiva nedzimwe hama dzaibva kunyika dzakasiyana-siyana uye hana dzedu dzainge dzisina kugadzikana tiri muimba inoitirwa misangano neDare Rinodzora. Hama dzomuDare Rokunyora dzakanga dzava kuda kuuya kuzotiona. Mavhiki mashoma ainge achangopfuura tainge taongorora matambudziko aisangana nevashanduri uye iye zvino taifanira kuudza Dare Rokunyora zvataifunga kuti ndizvo zvaizogadzirisa matambudziko acho. Asi nei musangano uyu waikosha chaizvo? Ndisati ndapindura mubvunzo uyu, regai ndimbokuudzai nezvoupenyu hwangu.
Ndakabhabhatidzirwa kuQueensland, uye ndakapayona kuTasmania, ndikaita basa roumishinari kuTuvalu, Samoa, uye Fiji
NDAKABEREKERWA muQueensland, kuAustralia, muna 1955. Ndichangozvarwa, amai vangu vanonzi Estelle vakatanga kudzidza Bhaibheri neZvapupu zvaJehovha. Vakazobhabhatidzwa gore rakatevera racho uye baba vangu Ron, vakazobhabhatidzwawo papera makore 13. Ndakabhabhatidzwa muna 1968 kuQueensland, mune imwe nzvimbo iri kumaruwa.
Kubvira ndichiri muduku, ndaifarira zvokuverenga uye zvokudzidza mitauro. Pataienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana nemota, vabereki vangu vanofanira kunge vainetseka pavaindiona ndakagara kumashure ndichiverenga mabhuku pane kutarisawo zvinhu zvinoyevedza. Asi kufarira kwandaiita kuverenga kwakandibatsira kuchikoro. Pandaiva kuchikoro chesekondari kuGlenorchy, chiri pachitsuwa cheTasmania, ndakapiwa mibayiro yakawanda yokugona chikoro.
Asi yakasvika nguva yokuti ndaifanira kusarudza kuti ndobvuma here bhezari rokunodzidza payunivhesiti kana kuti ndorega. Kunyange zvazvo ndaifarira mabhuku uye kudzidza, ndinoonga kuti amai vangu vakandidzidzisa kuda Jehovha kupfuura chero chii zvacho. (1 VaK. 3:18, 19) Pandakapedza chikoro chesekondari, handina kuzoenderera mberi nedzidzo uye ndakabva ndatanga kupayona muna January 1971, ndiine makore 15. Vabereki vangu vakanditsigira pane zvandakanga ndasarudza.
Makore 8 akazotevera, ndakava neropafadzo yokupayona muTasmania. Panguva iyoyo, ndakaroora imwe tsvarakadenga yokuTasmania, yainzi Jenny Alcock, uye kwemakore mana taishumira semapiyona chaiwo muSmithton uye muQueenstown.
BASA ROUMISHINARI MUZVITSUWA ZVEPACIFIC
Muna 1978, takaenda mhiri kwemakungwa kuti tinopinda gungano redu rokutanga renyika dzakawanda, muPort Moresby, kuPapua New Guinea. Ndichiri kuyeuka mumwe mumishinari achipa hurukuro nemutauro weHiri Motu. Kunyange zvazvo pasina kana chandainzwa, hurukuro yake yakaita kuti ndide kuva mumishinari, kudzidza mimwe mitauro, uye kupawo hurukuro dzinokurudzira hama mumutauro wadzo. Iye zvino ndakanga ndazowana nzira yokushandisa chido chandaiva nacho chokudzidza mimwe mitauro pakushumira Jehovha.
Zvakatishamisa kuti patakadzokera kuAustralia, takabva tanzi tinoshumira semamishinari pachitsuwa cheFunafuti, muTuvalu, iyo yaimbonzi Ellice Islands. Takasvika ikoko muna January 1979. MuTuvalu maingova nevaparidzi vatatu vakabhabhatidzwa.
Ndiina Jenny kuTuvalu
Kudzidza mutauro weTuvaluan kwakanga kusiri nyore. Hapana kana rimwe bhuku raiwanikwa mumutauro wacho kunze ‘kweTestamende Itsva.’ Kwaisava nemaduramazwi kana makosi ekudzidzira mutauro, saka takasarudza kudzidza mashoko 10 kusvika ku20 pazuva. Asi takaona kuti taisanzwisisa zvaireva mamwe mashoko akawanda ataidzidza. Somuenzaniso, pataida kuudza vanhu kuti kushopera kwakaipa, taivaudza kuti varege kushandisa zvikero uye midonzvo. Asi taitofanira kudzidza mutauro wacho nokuti taiva nevanhu vakawanda vatainge tatanga kudzidza navo Bhaibheri, saka takaramba tichidzidzira. Papfuura makore, mumwe munhu wataidzidza naye akazouya kwatiri akati: “Tiri kufara chaizvo kuti mava kutaura mutauro wedu manje. Pakutanga taisambonzwa zvamaitaura!”
Asi pane chimwe chinhu chakatibatsira kuti tikurumidze kubata mutauro wacho. Sezvo kwaisava nedzimba dzokurenda, takapedzisira tava kugara neimwe mhuri yeZvapupu mune imwe nzvimbo yaigara vanhu vakawanda. Izvi zvakaita kuti tinyatsonyura mumutauro wacho uye tijairane netsika nemagariro evanhu vacho. Takaita makore akawanda tisingatauri Chirungu, saka mutauro weTuvaluan ndiwo wakanga wava kutoita serurimi rwaamai.
Pasina nguva, vanhu vakawanda vakatanga kufarira chokwadi. Asi taizoshandisei pakudzidza navo? Tainge tisina mabhuku omutauro wavo. Vaizodzidza sei vari voga? Pavaizotanga kupinda misangano, vaizoimba nziyo dzipi, vaizoshandisa mabhuku api uye vaizogadzirira sei misangano yacho? Vaizofambira mberi sei kuti vasvike pakubhabhatidzwa? Vanhu ava vaida zvokudya zvokunamata mumutauro wavo. (1 VaK. 14:9) Tainetseka kuti kwaizombovawo here nemabhuku omutauro weTuvaluan, uyo unotaurwa nevanhu vasingasviki 15 000. Jehovha akapindura mibvunzo iyoyo, uye izvozvo zvakaita kuti tizive kuti: (1) Anoda kuti Shoko rake riziviswe “muzvitsuwa zviri kure,” uye (2) anoda kuti vaya vanoonekwa nenyika ‘sevakaderera,’ vapotere muzita rake.—Jer. 31:10; Zef. 3:12.
Muna 1980, hofisi yebazi yakatikumbira kuti tiite basa rokushandura. Tainzwa sokuti hatina kukodzera kuita basa iri. (1 VaK. 1:28, 29) Takatenga muchina kuhurumende wataishandisa kuprinda mabhuku okushandisa pamisangano yedu. Takatoshandurawo bhuku raZvokwadi Inotungamirira Kuupenyu Husingagumi muchiTuvaluan uye takariprinda tichishandisa muchina iwoyo. Ndichiri kuyeuka kunhuwa kwaiita ingi yataishandisa uye kushanda zvakaoma kwataiita kuti tiprinde mabhuku iwayo nemaoko apa kunze kuchipisa zvisingaiti. Panguva iyoyo tainge tisina magetsi.
Zvainge zvisiri nyore kushandura mabhuku mumutauro weTuvaluan nokuti taingova nemabhuku mashoma aitibatsira kuona kuti tingashandura sei. Asi dzimwe nguva taibatsirwa nevanhu vatisingafungiri. Rimwe zuva ari mangwanani, ndakasvika pane mumwe musha ndakanganwa kuti sekuru vepo vaisafarira zvapupu. Sekuru vacho vaimbova mudzidzisi. Vakabva vangotaura kuti havadi kuona Zvapupu pamba pavo. Vakabva vati: “Asi pane chinhu chimwe chete chandinoda kukuudzai. Mamwe mashoko amunonyora mumabhuku enyu hatinyanyi kuashandisa mumutauro weTuvaluan.” Ndakazobvunzawo vamwe, vakati ndizvo. Saka takabva tagadzirisa. Ndakashamiswa chaizvo kuti Jehovha ainge atibatsira achishandisa munhu akanga asingafariri zvapupu uyo anofanira kunge aitoverenga mabhuku edu.
Mashoko oUmambo Nhamba 30 muchiTuvaluan
Pepa rokukoka vanhu kuChirangaridzo ndiro rakatanga kuprindwa muchiTuvaluan. Kwakazoteverawo turakiti raMashoko oUmambo Nhamba 30, iro rakabudiswa panguva imwe chete nereChirungu. Takafara chaizvo kuti tainge tapa vanhu chimwe chinhu mumutauro wavo. Nokufamba kwenguva, mabhurocha uye kunyange mabhuku akatanga kubudiswa mumutauro weTuvaluan. Muna 1983, bazi rokuAustralia rakatanga kuprinda Nharireyomurindi muchiTuvaluan. Magazini yacho yaiva nemapeji 24 uye yaibuda pashure pemwedzi mitatu. Saka pavhiki, taidzidza ndima dzinenge 7. Vanhu vokuTuvalu vakafarira here mabhuku edu? Sezvo vanhu vacho vachifarira zvokuverenga, mabhuku edu akatanga kufarirwa nevanhu vakawanda. Pose paibudiswa bhuku idzva, raiziviswa munhau paredhiyo uye dzimwe nguva raitoitwa musoro wenhau! *
Basa rokushandura raiitwa sei? Taiita zvokunyora papepa nemaoko mashoko acho ose. Zvatainge tanyora zvaitaipwa kakawanda kusvikira zvanyatsobuda zvakanaka, zvisati zvatumirwa kubazi rokuAustralia. Dzimwe hanzvadzi mbiri dzokubazi idzo dzaisatomboziva mutauro weTuvaluan, dzaitaipa mukombiyuta mashoko ose atainge tatumira, uye izvi dzaizviita mumwe nemumwe ari pake oga. Mashoko acho aibva atariswa kuti abuda zvakafanana here. Izvozvo zvaibatsira kuti zvikanganiso zvive zvishoma. Mashoko aya ainge ataipwa aibva abatanidzwa nemapikicha, mapepa acho obva adzoswa nendege, toatarisa kuti abuda zvakanaka here, tobva taatumira zvakare kubazi kuti achiprindwa.
Iye zvino zvinhu zvachinja. Vashanduri ndivo vava kutaipa mashoko pakombiyuta uye vanobva vagadzirisa panenge pasina kubuda zvakanaka. Kakawanda zvokubatanidza mashoko acho nemapikicha zvinoitwa nemunhu anenge achishanda ari panzvimbo imwe chete nevashanduri. Kana vapedza, zvinobva zvatumirwa neIndaneti kumahofisi emapazi anoprinda mabhuku. Hakusisina zvokumhanya-mhanya tichienda kuposvo kunotumira mapepa ezvinhu zvinenge zvashandurwa.
Nokufamba kwenguva, ini naJenny takanzi tinoshumira kunzvimbo dzakasiyana-siyana dziri muPacific. Patakabva kuTuvalu takanzi tinoshumira kubazi rokuSamoa muna 1985. Taibatsira pabasa rokushandura mumitauro yeSamoan, Tongan, uye Tokelauan asiwo takaramba tichibatsira pabasa rokushandura muchiTuvaluan. * Muna 1996, takanzi tinoshumira kubazi rokuFiji tichinobatsira zvakare pabasa iroro rokushandura mumitauro inoti, Fijian, Kiribati, Nauruan, Rotuman, uye Tuvaluan.
Ndichidzidza nemunhu ndichishandisa mabhuku echiTuvaluan
Ndinoramba ndichibayiwa mwoyo nokushanda nesimba kunoita vaya vanoshandura mabhuku edu. Basa racho harisi nyore uye rinogona kuvasiya varukutika. Asi kungofanana naJehovha, hama nehanzvadzi idzi dzakatendeka dzinoda kuti mashoko akanaka aparidzwe “kumarudzi ose nemadzinza nendimi nevanhu.” (Zvak. 14:6) Somuenzaniso, pairongwa kuti Nharireyomurindi ishandurirwe mumutauro weTongan, ndakagara pasi nevakuru vose vomuTonga uye ndakavabvunza kana paiva nemunhu wataigona kudzidzisa basa rokushandura. Mumwe wevakuru ivavo aiva nebasa rakanaka reumakanika uye akataura kuti aigona kutorisiya zuva raitevera obva atotanga kuita basa rokushandura. Zvaakaita zvakandikurudzira chaizvo nokuti aiva nemhuri uye akanga asingatombozivi kuti aizowana kupi chouviri. Asi Jehovha akamuchengeta iye nemhuri yake, uye akaita basa rokushandura kwemakore akawanda.
Vashanduri ava vane maonero akafanana neehama dziri muDare Rinodzora, idzo dzinoda chaizvo kuti mabhuku edu abudiswe mumitauro yose, kunyange iya inotaurwa nevanhu vashoma. Somuenzaniso, pakamboita mubvunzo wokuti zvainge zvakakodzera here kuti mabhuku edu arambe achishandurirwa muchiTuvaluan. Ndakafara chaizvo pandakaverenga mhinduro yakabva kuDare Rinodzora yaiti: “Hapana chikonzero chokuti murege kuramba muchiita basa rokushandura mumutauro weTuvaluan. Kunyange zvazvo vanhu vanotaura chiTuvaluan vari vashoma kana tichienzanisa nemimwe mitauro, vanhu ivavo vanofanira kunzwa mashoko akanaka mururimi rwaamai.”
Ndichibhabhatidza vanhu mugungwa
Muna 2003, ini naJenny takachinjwa kubva kuDhipatimendi Reshanduro rokuFiji ndokuendeswa kuPatterson, New York kuti tinoshumira tiri muDhipatimendi Rinobatsira Vashanduri. Takaita setiri kurota. Takanga tava kubatsira pakuita kuti mabhuku edu ashandurirwe mumitauro yakawanda. Kwemakore anenge maviri akatevera, takawana ropafadzo yokushanyira nyika dzakasiyana-siyana kuti tinobatsira pakudzidzisa vashanduri maitirwo ebasa.
ZVIMWE ZVISARUDZO ZVINOKOSHA
Iye zvino regai ndichikuudzai nezvemusangano unokosha wandambotaura nezvawo patangira nyaya ino. Pakazosvika gore ra2000, Dare Rinodzora rakaona kuti vashanduri vari munyika yose vaifanira kudzidziswa basa rokushandura. Panguva iyoyo, vashanduri vakawanda vainge vasinganyatsozivi maitirwo ebasa racho. Patakanga taudza Dare Rokunyora zvataifunga, Dare Rinodzora rakabvumira kuti pave neurongwa hwokudzidzisa vashanduri vari munyika yose. Vashanduri vaizodzidziswa kuti vangaita sei kuti vanzwisise mashoko eChirungu, vashandure zvinhu zvinonzwisiswa nevanhu uye kuti vashande setimu.
Zvose izvi zvakaguma nei? Shanduro yacho yavandudzika. Uyewo mabhuku edu ava kubudiswa mitauro yakawanda chaizvo. Patakatanga basa roumishinari muna 1979, Nharireyomurindi yaibudiswa mumitauro 82 chete. Magazini emimwe mitauro aizobudiswa patova nemwedzi yakawanda magazini iyoyo yabudiswa muChirungu. Asi iye zvino, magazini eNharireyomurindi ava kubudiswa mumitauro inopfuura 240 uye akawanda acho ava kubuda panguva imwe chete nepanobuda eChirungu. Mabhuku edu ava kuwanikwa mumitauro inopfuura 700. Makore akapfuura, taisambofungira kuti zvinhu zvakadaro zvingaitika.
Muna 2004, Dare Rinodzora rakasarudza kuti Bhaibheri rishandurwe mumitauro yakawanda nokukurumidza. Pangopera mwedzi mishoma chisarudzo ichi chaitwa, kushandurwa kweBhaibheri ndiko kwainge kwava kunyanya kuiswa pokutanga. Izvi zvakabva zvaita kuti Shanduro yeNyika Itsva iwanikwe mune mimwe mitauro yakawanda. Kubva muna 2014, shanduro iyi iri kuprindwa mumitauro 128, riri Bhaibheri rakazara kana kuti zvikamu zvaro. Izvi zvinosanganisirawo mimwe mitauro inotaurwa muSouth Pacific.
Ndichibudisa Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro echiKristu echiGiriki mumutauro weTuvaluan
Handikanganwiwo ropafadzo yandakawana yokupinda gungano rakaitwa kuTuvalu muna 2011. Kwemwedzi yakawanda, mvura yakanga isinganayi munyika iyoyo uye zvaiita sokuti gungano racho raizokanzurwa. Asi manheru atakasvika, mvura yakatsvotsvoma, saka takakwanisa kuita gungano redu. Ndakawana ropafadzo yakakura chaizvo yokubudisa Shanduro yeNyika Itsva yeMagwaro echiKristu echiGiriki mumutauro weTuvaluan. Kunyange zvazvo kuine hama shoma dzinotaura mutauro uyu, zvinofadza kuti dzakawanawo shanduro iyi. Pakapera gungano racho, mvura yakatsvotsvoma zvakare. Saka munhu wose akanga ava nemvura, kusanganisirawo mvura yakawanda yechokwadi.
Ndichikurukura nevabereki vangu, Ron naEstelle, pagungano rakaitwa kuTownsville, Australia, muna 2014
Zvinosuwisa kuti mudzimai wangu Jenny uyo wandakashumira naye Jehovha kwemakore anopfuura 35, akanga asipo pagungano iri. Akanga ava nemakore gumi achirwara nekenza yemazamu uye akashaya muna 2009. Paachamutswa, achafara chaizvo paachanzwa kuti Bhaibheri rakazobudiswa mumutauro weTuvaluan.
Jehovha akazondipawo mumwe mudzimai akanaka chaizvo anonzi Loraini Sikivou. Loraini naJenny vaishanda vose paBheteri rokuFiji uye Loraini aivawo mushanduri, achishandura mumutauro weFijian. Saka ndava nemumwezve mudzimai akatendeka uye tinoshanda tose mubasa raJehovha, uye naiyewo anofarira mutauro.
Ndiina Loraini, tichiparidza muFiji
Pandinotarisa zvakaitika mumakore akapfuura, ndinoona kuti Baba vedu vokudenga vane rudo Jehovha, vane hanya nevanhu vemitauro yose, kunyange iya inotaurwa nevanhu vashoma. (Pis. 49:1-3) Ndinoona rudo rwavo pandinoona vanhu vachifara pavanotanga kuwana mabhuku edu mumutauro wavo kana kuti pavanoimba nziyo dzokurumbidza Jehovha nerurimi rwaamai. (Mab. 2:8, 11) Ndichiri kuyeuka zvakataurwa neimwe hama yakanga yakwegura yaitaura chiTuvaluan yainzi Saulo Teasi. Hama iyi payakaimba rwiyo rwoUmambo kekutanga mumutauro wayo yakati: “Munofanira kuudza Dare Rinodzora kuti nziyo idzi dzinonyatsonakidza muchiTuvaluan kupfuura zvadzinoita muChirungu.”
Kubva muna September 2005, ndakawana imwe ropafadzo yandakanga ndisingambofungiri yokushumira senhengo yeDare Rinodzora reZvapupu zvaJehovha. Kunyange zvazvo ndisisiri mushanduri, ndinoonga Jehovha nokundibvumira kwaanoita kuti ndirambe ndichitsigira basa rokushandura riri kuitwa munyika yose. Zvinofadza chaizvo kuziva kuti Jehovha ane hanya nezvinodiwa nevanhu vake vose pakunamata, kunyange vaya vanogara muzvitsuwa zviri kwazvo zvoga pakati pePacific Ocean. Izvi ndizvo zvakataurwa nemunyori wepisarema paakati, “Jehovha ava mambo! Nyika ngaifare. Zvitsuwa zvizhinji ngazvifare.”—Pis. 97:1.
^ ndima 18 Zvimwe zvaitaurwa nevanhu paibudiswa mabhuku edu zviri muNharireyomurindi yaDecember 15, 2000, peji 32; neyaAugust 1, 1988, peji 22; uye Mukai! yaJanuary 8, 2001, peji 27.
^ ndima 22 Mamwe mashoko anotaura nezvebasa rokushandura kuSamoa, ari muBhuku Regore ra2009 mapeji 120-121, 123-124.
Rimwe Basa Rakandinakidza
Kubva muna 1979, ndakatanga kunyora pasi mashoko echiTuvaluan nezvaanoreva. Ndaiita basa iri kweawa imwe chete mangwanani oga oga kwemakore anenge 20. Mashoko aya akazowanda zvokuti ndakatozosvika pakugadzira duramazwi. Muna 2001, hurumende yeAustralia yakaprinda duramazwi iri sechipo kuvanhu vekuTuvalu. Muna 1999, ini naJenny takabudisawo bhuku regirama romutauro weTuvaluan.
NHARIREYOMURINDI (YOKUDZIDZA) August 2015